झ्याउरे लयमा कविता ‘आफ्नो मान्छे’ २०६७ कक्षा९ मा पढ्दा लेखेको शीर्षक-आफ्नो मान्छे लय-झ्याउरे लय ( ३+२+३+२+३+३=१६) |
Posted on डिसेम्बर 15, 2015 by Padam Prasad Paudel	टिप्पणी छोड्नुहोस्
झ्याउरे लयमा कविता ‘आफ्नो मान्छे’ २०६७ कक्षा९ मा पढ्दा लेखेको
लय-झ्याउरे लय ( ३+२+३+२+३+३=१६)
आफ्नो भनि नलाग पछि लात्तिले हान्नेछ!
पहिले गर्छ निकै नै माया कहिले मार्नेछ!!
कुभलो सोच्छ दुर्दशा खोज्छ सुकर्म गर्दैन!
बाहीरिसग मिलेर त्यस्ले बढ्न दिदैन!!४!!
आफ्नोलाई आगोमा फाली खुसीमा बढ्छ!
बाहिर इई भित्र छ हाहा दुखमा पार्दछ!!
बाहिर मात्र देखिन्छ राम्रो धमिरो छ भित्र!
सोवार्थी छ त्यो मानिसलाई नभन है मित्र!!८!!
सम्पत्ति देखे मित्रता गास्छ दुखमा हेर्दैन!
त्यस्लाई पर्दा लौ न लौ भन्छ हाम्लाई गर्दैन!!
धनमा भुल्छ फूलमा डुल्छ अरुमा हिड्दैन!
आफूला पर्ला भन्दैन त्यस्ले कहिल्यै सोच्दैन!!१२!!
भन्दछ मान्छे ठुलो नी हुन्छ सम्पत्ति धनले!
सोच्दैन त्यसले बनाई चिसो नरम मनले!!
आफनैला धस्छ बनाई हलो नराम्रो काममा!
फाईदालाई त्यसले गर्छ प्रयोग दाममा!!१६!!
गर्दछ पाप आफ्नैको आफै मार्दछ हासेर!
गरेको पाप धुरीमा आई नाच्दछ हासेर!!
सतर्क होउ खेयाल गर पछि है नलाग!
नदेउ ध्यान नभन मित्र सम्पर्क नराख!!२०!!
Previous post ← झ्याउरे लयमा ‘के गर के नगर’ २०६७ कक्षा९ पढ्दा लेखेको कविता
Next post पहिलो पटक घर छोडेर हिड्दा ( मुक्तक मञ्जरी) →